Tehirizo izao ny Ulefone Power 3S ao amin'ny GearBest, finday misy batterie 6350mAh sy fanekena tarehy! | Androidsis
Tehirizo izao ny Ulefone Power 3S ao amin'ny GearBest, finday misy batterie 6350mAh sy fanekena tarehy!
Aaron Rivas | | About us, Ulefone
Ulefone, mpanamboatra finday avo lenta sinoa, dia nanomana fihenam-bidy marobe ho anay ao amin'ny GearBest, fivarotana an-tserasera manokana amin'ny tolotra tsy mampino, toy ilay manana Ulefone Power 3S, finday izay azontsika itehirizana amin'ny vidiny kely $ 169.99 (137 euro eo ho eo.) fa tsy ny 229.99 dolara (186 euro eo ho eo) ny vidiny tany am-boalohany.
Ity terminal ity dia misy fiasa tena tsara, izay ahatongavan'ilay efijery vahaolana avo lenta, ny bateria goavambe ananany, ary ireo fakantsary roa misy azy ao an-damosina sy eo anoloana. Na dia tsy momba an'io fotsiny aza izy io, fa koa momba ny endri-javatra maro sy ny masontsivana mendrika ny salantsalany manontolo Premium fa manana antsika ny Ulefone Power 3S. Manitatra anao izahay!
Ny Power 3S dia tonga miaraka amina seho 18: 9: 6 lehibe amin'ny famaha FullHD + 1.080 x 2.160 teboka.. Eo ambaniny dia mampiditra processeur Mediatek Helio P23 (MT6763T) matanjaka valo (4x Cortex-A53 amin'ny 2.3GHz + 4x Cortex-A53 amin'ny 1.6GHz), fahatsiarovana RAM 4GB miaraka amina habaka fitahirizana ROM 64GB. Fitehirizana anatiny mivelatra amin'ny alàlan'ny karatra microSD hatramin'ny 256GB, ary bateria 6.350mAh goavambe izay mahazaka na dia ny fampiasana faran'izay mafy aza miaraka amina elanelam-potoana hanomezana jiro mandritra ny ora maro.
Raha ny fizarana sary, ity smartphone ity dia miaraka amin'ny fakan-tsary 16MP + 5MP aoriana, ary, eo aloha, ho an'ny selfie, antso an-tsary ary ny fanekena ny tarehy, avo roa heny amin'ny 13MP + 5MP. Amin'ny lafiny roa dia miaraka amin'ny LED Flash izy ireo.
Amin'ny lafiny iray, ny Ulefone Power 3S dia manana mpamaky rantsan-tànana ao aorinan'ny fakantsary, ary mihazakazaka ivelan'ny boaty Android 7.1 Nougat, na dia nanome toky aza ny orinasa fa handray ny fanavaozana ny Android 8.1 Oreo amin'ny volana martsa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Tehirizo izao ny Ulefone Power 3S ao amin'ny GearBest, finday misy batterie 6350mAh sy fanekena tarehy!
Google Chrome dia hanafaingana ny famoahana pejy hatramin'ny 35%
Hihaona amin'ny Infinix Hot S3, terminal iray mangetaheta laza